PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: April 2013
မန်မာစစ်တပ်မှ T.N.L.A ခွင့်ပြန် ရဲဘော် ၃ ဦးအား သတ်ဖြတ်
အခုလို ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိစေဖို့ ဒီကနေ့ ညနေ ၅ နာရီကစတင်လို့ ဥက္ကံမြို့ကို ပုဒ်မ (...၁၈၈) အမိန့် ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း ဥက္ကံမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက လိုက်လံကြေညာနေပါတယ်။
ဥက္ကံမြို့ ပြန်လည်တည်ငြိမ်း အေးချမ်းစေဖို့အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း ရဲမှူးကြီး သူရဝင်းနိုင်က ဒေသခံ တပ်ရင်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေကို စီမံဆောင်ရွက်နေသလို ဥက္ကံမြို့ပတ်ဝန်းကျင်က မြို့နယ်တွေကိုလည်း တည်ငြိမ်မှုရှိစေဖို့အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသွားရောက်ပြီး လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
ခလရတပ်ရင်း ၅၀၂ စစ်သားမှ ပလောင် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအားအတင်းအဓမ္မပြုကျင့်
ရှမ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန်တုံမြို့နယ် ရေပုံကျေးရွာတွင်အခြေစိုက်နေသော မြန်မာစစ်တပ် ခလရတပ်ရင်း (၅၀၂) စစ်သား များမှ ရေပုံးရွာရှိတအာင်းအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုဧပြီလ ၁၉-၂၀ ရက်နေ့တွင်အတင်း အဓမ္မပြုကျင့် ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
၁၉ရက်နေ့တွင် ခလရ(၅၀၂)တပ်ရင်းစစ်သားတစ်ဦးမှ ည ၉နာရီ အချိန် တွင် ရေပုံးရွာနေ အသက် ၃၇ နှစ် ရှိမုဆိုးမ မအီအီင်ဆိုသူ အိမ်ထဲဝင်ရောက်ပြီး သူ့မကို ပါးစပ်ပိတ်ကာအတင်းအဓမ္မပြုခဲ့ကြောင်းနှင့် တစ်ခြား သူများကို သတင်းပေးပါက သတ်ပစ် မည့်ဟုခြိမ်ခြောက်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ထိုနည်းတူ ဧပြီလ၂၀ရက်နေ့ တွင် လည် ခလရ တပ်ရင်း (၅၀၂)နောက် ထပ်စစ် သားတစ်ဦးမှ မအီခင်(ခေါ်) ကလေးအမေတစ်ဦးကို လက်ဖက်ခြံ တွင် အတင်းအဓမ္မပြု ကျင့်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာမအီအီမှ လက်ဖက်ခြံတွင်လက်ဖက်ခူးနေစဉ် ဗမာစစ်သား တစ်ဦး မှ ရောက်ရှိလာပြီးသူ့မအား ဓါးဖြင့်ထောက်ပြီး အတင်းအဓမ္မပြုကျင့် ခဲ့ကြောင်းမအီအီခင် ကသူ့မမှာအိမ်ထောင်နှင့် ကလေးရှိကြောင်း ငိုပြီး တောင်းပန်းခဲ့ရာ တွင်လည်းမရ ကြောင်းနှင့် ၎င်းစစ်သားမှ သတင်းပေါက်ကြား ပါကမိသားစု
ဧပြီ ၂၈ ရက်တွင်လည်း တောင်ကြီးမြို့မှ မိုင်းရှူးမြို့ဘက်သို့ စစ်ယာဉ်တန်းအစီး ၁၀၀ ကျော် တက်လာ ကြောင်း၊ စစ်ကားတစီးလျှင် လူ ၁၅ ယောက်တင်ဆောင်ကြောင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စစ်လက်နက်များ
Posted by PNSjapan at 2:09 PM0comments
တရုတ်နယ်စပ်တလျှောက် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာ နေရာဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ UWSA ဟာ လက်ရှိမှာ မြန်မာအစိုးရတပ်နဲ့ မခိုင်မြဲလှသော အပစ်ရပ်ရေး သဘောတူညီချက် ရယူထားပါတယ်။
အခု Mi-17 ရဟတ်ယာဉ်တွေကို တရုတ်နိုင်ငံကနေ တိုက်ရိုက် မဟုတ်ဘဲ လာအိုဘက်က တဆင့် မဲခေါင်မြစ်ကို ဖြတ်ပြီး ၀နယ်ကို ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တဖွဲ့ကပြောဆိုပြီး
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကို ဆက်လက်ဆန့်ကျင်နေကြတဲ့ ဒေသခံများ ....
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကို ဆက်လက်ဆန့်ကျင်နေကြတဲ့ ဒေသခံတွေကို သွေးထိုး လှုံ့ဆော်ပေးတယ်ဆိုပြီး ရန်ကုန်မြို့က လူငယ် ၈ ဦးကို ရဲက ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ထားပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင်က တင်ပြထားပါတယ်။
Copy from - RFA Burmesevideo
Posted by PNSjapan at 1:34 PM0comments
အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေ၊ ILOရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို သိရှိအောင် အခုလိုညီလာခံ ကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့ အလုပ်သမား အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန
Posted by PNSjapan at 1:26 PM0comments
ကလေးသူငယ်များ၏ အာဟာရ ချို့တဲ့မှု၊ စာတတ်မြောက်မှု များကိုလည်း သီးခြားထည့်သွင်း အကြံပြုထားသည်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများနှင့်ပတ်သက်၍ လူပေါင်း ၂ ထောင်ကျော်အား ကွင်းဆင်းမေးမြန်းချက်များအပေါ် အခြေခံသည့် အစီရင်ခံစာကို ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်က အများပြည်သူသို့ ယနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် နိုင်ငံသားဖြစ်ပိုင်ခွင့်ကိစ္စ၊ ယာယီနေရာချထားရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးများ၊ နယ်စပ် ပိုင်နက်လုံခြုံရေးနှင့် လူဦးရေ ပြန့်ပွားမှုနှုန်းမြင့်မားသည့် ကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ အပါအ၀င် အခန်း ၁၄ ခန်းနှင့် စာမျက်နှာ ၁၃၈ မျက်နှာ ပါရှိသည်။
လူပေါင်း ၁သိန်းကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကာ ဒုက္ခသည်များဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ခက်ခဲမှုများကြောင့် မိသားစုစားဝတ် နေရေးများ ထိခိုက်မှုရှိနေကြောင်း၊ အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသူငယ်များ စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ တိုးပွားလာနေကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အတူ လူမျိုးစု တစ်စုနှင့်တစ်စုအကြား မယုံကြည်မှုများတိုးပွားလာနေခြင်း၊ ဆက်ဆံရေး ပြတ်တောက်ခြင်းနှင့် တင်းမာမှုများမြင့်တက်နေခြင်းများလည်း ဖြစ်ပေါ်နေရာ ယင်းကိစ္စရပ်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် လုံခြုံရေးတပ်အင်အားများ ရုတ်တရက် များပြားစွာ လျှော့ချခြင်းမပြုရန်၊ တပ်မတော်ရေတပ် အင်အားတိုးချဲ့ချထားရန်၊ ကမ်းခြေစောင့် ရေဒါစခန်းများ၊ ကင်းလှည့်ရေယာဉ်များ၊ CCTV စောင့်ကြည့်ရေး ကင်မရာများ၊ လူလုပ် အတားအဆီးများချထားရန် စသည့်အချက်များ ပါဝင်သည့်
တိုက်ပွဲကြောင့် မြိုင်ကြီးငူ ဒေသခံ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ
ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် မြိုင်ကြီးငူရွာတွင် ဒီမိုကရေစီ ကရင်အကျိုးပြုတပ်မတော်(DKBA)နှင့် နယ်ခြား စောင့်တပ်(BGF)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲကြောင့် ဒေသခံလူထုများ နေအိမ်စွန့်ခွါကာ ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်နေရသည်ဟု မြိုင်ကြီးငူ ဒေသခံများ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
မြိုင်ကြီးငူတွင် ဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့မှစ၍ ယခုထိ ဖြစ်ပွားသည့်တိုက်ပွဲကြောင့် တိုက်ပွဲနေရာနှင့် အနည်းငယ် အလှမ်း ဝေးသည့် လေးလုံးမြိုင်ရပ်ကွက်မှလွှဲ၍ ရွှေနံ့သာမြိုင်၊ ပိတောက်မြိုင်၊ နှင်းဆီမြိုင်နှင့် ဇီဇ၀ါမြိုင် စသည့် ရပ်ကွက် များရှိ လူထုများသည် ယင်းအနီးတ၀ိုက်ရှိ ကမမောင်းမြို့အပါအ၀င် အုန်းတော၊ ကော့လူးကျွန်း၊ ကုန်းန၀င်းနှင့် ရွာသာအေး စသည့်ကျေးရွာများသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရသည်ဟု
Posted by PNSjapan at 10:15 PM0comments
Posted by PNSjapan at 9:46 PM0comments
၇ ကြိမ်မြောက် ဒီမိုကရေစီအသိုက်အ၀န်းရဲ့ ညီလာခံကုို မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်...
မွန်ဂိုလီယားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ၇ ကြိမ်မြောက် ဒီမိုကရေစီအသိုက်အ၀န်းရဲ့ ညီလာခံကုို မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်နေပါတယ်။ ဦးအံ့ဘုန်းမြတ် သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ (ရိုက်ကူး - ကျော်ဇေယျာဝင်း)
Posted by PNSjapan at 7:49 PM0comments
ဒေသခံတစ်ဦးမှ ဗုံပေါက်သံတော့ ၃ခါကြားရတယ် အဲဒီဖြစ်တဲ့ ညနေ့ပိုင်းက ဗမာစစ်သား ၃ ယောက် သေသွားတယ်၊ ကျနောတို့ ရွာမှာ မြန်မာစစ်သားတွေ ခဏခဏလာပြီ ပလောင် စစ်သားတွေဘယ်မှာရှိလဲ ဘာညာနဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်ပြီး ချိန်ခြောက်လို့ ရွာသားတွေ ထိတ် လန့်နေကြရတယ်လို့ သူ့
Malacca Highway သင်္ဘောနှင့် မြန်အောင်သင်္ဘောတို့ တိုက်မိပြီး မြန်အောင်သင်္ဘော နစ်မြုပ်သွားစဉ်
Malacca Highway သင်္ဘောနှင့် မြန်အောင်သင်္ဘောတို့ တိုက်မိပြီး မြန်အောင်သင်္ဘော နစ်မြုပ်သွားစဉ် (ဓာတ်ပုံ-မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်)
ဧပြီလ ၂၉ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်
ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြစ်အတွင်း Malacca Highway ကားတင်သင်္ဘောနှင့် မြန်မာ့ရေနံ ဓာတုဗေဒ လုပ်ငန်းပိုင် မြန်အောင် သင်္ဘောတို့ အချင်းချင်းတိုက်မိပြီး မြန်အောင်သင်္ဘောမှာ လုံးဝနစ်မြုပ်သွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
မြန်မာ့ရေနံ ဓာတုလုပ်ငန်းပိုင် မြန်အောင် ရေနံတင် သင်္ဘောသည် စက်သုံးဆီများအား မော်လမြိုင် ဆိပ်ကမ်းသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ရာ
ဧပြီ ၂၈ ရက်၊ နေ့လည် ၁ နာရီ ၂၀ မိနစ်ခန့်တွင် မှော်ဝန်းမီးပြဗော်ယာ သို့ ကွေ့လာချိန်တွင် သီလ၀ါ MIPL ဆိပ်ကမ်း၌ မော်တော်ကားများချပြီး ရန်ကုန်မြစ်ဝသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာသော Malacca Highway
Posted by PNSjapan at 12:30 PM0comments
Posted by PNSjapan at 12:20 PM0comments
ရန်ကုန်၊ လှည်းတန်းတ၀ိုက်မှာညနေဆို ရုံးသွားရုံးပြန်တွေနဲ့ စည်ကားနေတာကတော့ ထုံးစံပါ။ လိုင်းကားတွေ၊ အငှားကားတွေ၊ ကိုယ်ပိုင်ကားတွေနဲ့ အမြဲလို ပိတ်ဆို့နေတဲ့ လမ်းကြောလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မှော်ဘီ၊ တိုက်ကြီး သွားတဲ့ မြောက်ပိုင်းခရိုင်ယာဉ်လိုင်းက ဟိုင်းလတ်ကားလေးတွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ မှော်ဘီ၊ တိုက်ကြီးကနေ ရန်ကုန်ကို အသွားအပြန်လုပ်သူတွေ အားထားရတဲ့ ကားလိုင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားတွေ စီးရဖို့ကလည်း ညနေပိုင်းတွေမှာဆို တော်တော်လေး မလွယ်ပါဘူး၊ ပုံမှာတွေ့တဲ့ အတိုင်းပါပဲ၊ အလုအယက် ပြေးလွှားပြီး နေရာရဖို့ ကြိုးစားရပါသေးတယ်။
ဒီကားတွေကို အမြဲလိုစီးနေကျ ခရီးသည်တဦးက ...
“ကားတွေက အရမ်းမြန်တယ်၊ ညပိုင်းလဲရှိတော့ ရုံးနောက်ကျတဲ့လူတွေ၊ ညပိုင်း အလုပ်ဆင်းတဲ့သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေတယ်။ ကားမောင်းတာ အရမ်း အမြန်မောင်းတာကြောင့် အန္တရာယ်ရှိမယ်မှန်း
တအာင်းအမျိုးသားတို့၏ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာနေ့ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး - P.S.L.F ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်
၂၉ ရက်၊ ဧပြီလ၊ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်။
ထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်။ ဝဝ၄/၀၅/ဌနခ-၁၃ ၁။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့သည် တအာင်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တအာင်း မိဘပြည်သူတို့၏ အသက်၊ သွေး၊ ချွေး၊ စည်းစိမ် မြောက်များစွာဖြင့် ရင်းနှီး တည်ဆောက် ခဲ့သော “ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်-P.S.L.A” လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ကို မြန်မာစစ်အစိုးရက နိုင်ထက် စီးနင်း အင်အားသုံး လက်နက်ဖြုတ် သိမ်းခဲ့သည့် တအာင်းအမျိုးသားတို့၏ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ နေ့ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားအတွက် ကြီးမားသည့် ဆုံးရှုံးမှု လည်း ဖြစ်ပါသည်။
တပ်မတော် နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး
ပြီးခဲ့တဲ့တပ်မတော်စစ်ရေးပြပွဲမှာ တရုတ် မြောက်ကိုးရီးယား စတဲ့ အာဏာရှင် တိုင်းပြည်တွေမှာလို အကြီးစား စစ်လက်နက်ယန္တရားတွေ ထုတ်ပြခဲ့လို့ ဇာတိမာန် တက်သူလည်းတက်၊ နိုင်ငံရဲ့ပကတိဘဝနဲ့ယှဉ်ထိုးပြီး ဝမ်းနည်းသူလည်း ဝမ်းနည်း ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဝမ်ပေါင်ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီ နော်ရင်ကို စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးက ထုတ်လုပ်တဲ့ ၁၀၅မမ တင့်ဖျက် တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်နဲ့ ၁၅၅မမ ယာဉ်တင် ဟောင်ဝစ်ဇာတွေဟာ လက်ပန်တောင်း ပြည်သူတွေနဲ့သံဃာတော်တွေရဲ့ မျက်ရည်တွေသွေးတွေနဲ့ လဲယူထားတာဖြစ်လို့ ရင်နာစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ နော်ရင်ကို ထုတ်လက်နက်တွေ မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ အများအပြားရှိပေမဲ့ အခုပြတဲ့နှစ်မျိုးက ကြေးနီစီမံကိန်းကို တရုတ် လက်ထိုးအပ်ပြီးမှ နောက်ဆုံး ရောက်လာတာတွေဖြစ်လို့ မြန်မာပြည်သူတွေ ကို တမင် စော်ကားပြတဲ့ သဘောပါဘဲ။
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်၁၀၅မမ တင့်ဖျက်ယာဉ်တစီး တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ နှစ်သန်းခွဲ ($ ၂,၅၀၀,၀၀၀)၊ ၁၅၅မမ တစီး ရဲ့တန်ဖိုးကဒေါ်လာ သုံးသန်းခွဲ ($ ၃,၅၀၀,၀၀၀) ရှိပါတယ်။ တင့်ဖျက်ယာဉ် ၂၄ စီး ပြခဲ့တော့ ဒေါ်လာ သန်း၆၀ ဖိုး၊ ၁၅၅မမ ၆ စီးဆိုတော့ ဒေါ်လာ ၂၁ သန်းဖိုး၊ တော်လှန်ရေးနေ့ ထုတ်ရှိုးပွဲအတွက်တင်နော်ရင်ကိုကုမ္ပဏီက ဒေါ်လာ ၈၁ သန်း ရသွားခဲ့တဲ့သဘောပါဘဲ။ မပြဘဲချန်ထားတဲ့ လက်နက်ယန္တရားတွေလည်းရှိသေးတာ အသေအချာပါဘဲ။
[တခြားပြခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးတွေမှာမြောက်ကိုးရီးယား လုပ် ၁၂၂မမ ယာဉ်ဆွဲဟောင်ဝစ်ဇာ တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ တစ်သန်း ($ ၁,၀၀၀,၀၀၀)၆ စီးဆိုတော့ ဒေါ်လာ ၆ သန်း၊ ရုရှားလုပ် ပက်ချိုရာ လေယာဉ်ပစ်ဒုံး
Posted by PNSjapan at 2:12 PM0comments
၁။ တည်ငြိမ်မှု့ ရင်ဘတ်စည်တီး ငိုကြီးချက်မ၍ ယူကျုံးမရ အပူလုံးကြွသူ မတွေ့ရ ။ သောကကို တည်ငြိမ်စွာ ဖြေဖျောက် နိုင်ကြသည် ။ ၂ ။ ဂုဏ်သိက္ခာ ရေနှင့် စားသောက်ကုန်များကို စည်းစနစ်တကျ တန်းစီယူကြသည် ကြမ်းတမ်းသော စကား ရိုင်းစိုင်းသော အမူအရာ လုံးဝ မတွေ့ရ ။ ၃။ စွမ်းရည် သာဓကအားဖြင့် မယုံနိုင်လောက်အောင် တော်သော ဗိသုကာပညာရှင် များရှိသည်။ အဆောက် အအုံများသည် ယိုင်းယိုင် သွားသော်လည်း ပြိုမကျ ။ ၄။ ထောက်ထားညှာတာမှု့ လောလောဆယ် လိုအပ်သမျှသာ ဝယ်ကြသည် ။ အခြားသူများလည်း ရပါစေတော့ ဟူသည့် စိတ်ကိုထားသည် ( နောက်လူ ဝယ်စရာမကျန်အောင် မိမိတစ်ဦးတည်း လောဘတကြီး သိမ်းကျုံး ဝယ်ယူခြင်းမျိုးမလုပ် ) ၅။ စည်းကမ်း သေဝပ်မှု့ ဆိုင်များတွင် လုယက်ခြင်းမရှိ လမ်းပေါ်တွင် ဟွန်းသံတညံညံ လုပ်ခြင်း ကျော်တက်ခြင်းများမရှိ အချင်းချင်း နားလည်ပေးမှု့ရှိသည် ။ ၆။ အနာခံမှု့ နျူကလီးယား ဓါတ်ပေါင်းဖိုများတွင် ပင်လယ်ရေကို စုပ်ထုပ်ရန် အလုပ်သမား ( ဝန်ထမ်း ၅၀ ) သည် နောက်ချန်နေခဲ့သည်. ( ရေဒီယို ဓါတ်ရောင်ခြည် သင့်မှု့ ခံရမည်ကို သိလျက်နှင့် စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံခြင်းဖြစ်သည် ) သူတို့၏ ကျေးဇူးနှင့် မြင့်မြတ်သော စိတ်ထားကို မည်သို့ ပေးဆပ်နိုင်ပါမည်နည်း ။ ၇။ ကြင်နာယုယမှု့ စားသောက်ဆိုင်များက ဈေးနှုန်း လျှော့ချပေးကြသည် အစောင့်အရှောက် မရှိသော အေတီအမ် ( ငွေထုတ်စက် )စက်တစ်လုံးကို
Posted by PNSjapan at 1:55 PM0comments
၁၃-၄-၂၀၁၃ (သင်္ကြန်အကြိုနေ့) တုန်းက အဲဒီ့ကောင်မလေးက ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ ရင်းနှီးတဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက် (ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့် နာမည် နတ်သားလေး တဲ့)နဲ့ ချိန်းတွေ့ပါသတဲ့။ ချိန်းတွေ့ရင်း ကောင်မလေးကို သတ်ဖြတ်ပြီး ပိုက်ဆံနဲ့ဖုန်းကို ယူသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကောင်မလေးအလောင်းကို သူ့အခန်းထဲမှာ အ၀တ်အစားမပါပဲ တွေ့တယ်ဆိုတော့ အဓမ္မကျင့်ဖို့ ကြံစည် ရင်းနဲ့ အသတ်ခံလိုက်ရတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခုတော့ တရားခံကို ဆမူပါကန်မြို့ဖမ်းမိပြီလို့ သိရပါတယ်။ တရားခံကလည်း မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက် ပါပဲ။ ပြည်ပရောက်နေ တဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း ယုတ်မာရဲတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ရွံမိပါ တယ်။
ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်က မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့လည်း ချက်တင်မှာ တွေ့တဲ့သူတိုင်းကို လွယ်လင့်တကူ မယုံကြည်သင့်ကြောင်း မမြင့်မြင့်အေး (ခ) သဲသဲသော် (ဖေ့စ်ဘုတ်အမည် Sky Queen) က အသက်နဲ့
Posted by PNSjapan at 8:48 PM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက် သမ္မတ ဖြစ်ဖို့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာ အားလုံး ပြောနေ၊ တောင်း ဆိုနေကြ၊ ကြိုးပမ်းနေကြပေမယ့် အခုထိ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက် NLD ပါတီလည်း
Posted by PNSjapan at 3:41 PM0comments
ညောင်ပင်သာရဲစခန်းကို ချီတက်ဆန္ဒပြတဲ့အဖွဲ့ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ရှေ့ဆက်မသွားဖို့ စည်းတားပိတ်ဆို့ထားစဉ်
မုံရွာခရိုင် ကြေးနီစီမံကိန်းနယ်မြေက လက်ပံတောင်းတောင်ခြေမှာ ဧပြီလ ၂၅ ရက် မနေ့က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ဒေသခံတွေ တင်းမာမှုဖြစ်ရာကနေ အဖမ်းခံထားရသူ ၃ ဦးကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးဖို့ ဒီကနေ့ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ရာနဲ့ချီတဲ့ ဒေသခံတောင်သူ လယ်သမားတွေက ချီတက်တောင်းဆိုကြပါတယ်။
မနေ့က ရန်ကုန်ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက်အဖွဲ့က ကိုအောင်စိုးအပါအ၀င် ဒေသခံ ၂ ဦးကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားတာပါ။
ဒီနေ့လယ်သမားတွေဟာ ကြေးနီစီမံကန်းအနီး တုံရွာထိပ်ကနေ ညောင်ပင်သာရဲစခန်းအထိ လမ်းလျှောက်ချီတက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြရာမှာ ၀က်မှေး-ကန်တောရွာသစ်ကြီးထိပ်မှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့ ဒေသခံတွေက ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ နယ်မြေကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ ဥပဒေအရ တားမြစ်ရတာဖြစ်တယ်လို့
တရုတ်နှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် သဘောထား တင်းမာသူ ဆာမူရိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာပြည်လာမည်
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးတို့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် လာရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆို...
တရုတ်နှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် တင်းမာသည်ဟု ယူဆရဖွယ်ရှိသည့် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာမည့် မေလအတွင်း လာရောက်မည်ဟု ဂျပန်မီဒီယာများက ဖော်ပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရုတ်၏ လွှမ်းမိုးမှုကို တန်ပြန်ရန် ရည်ရွယ်ထားပုံရသည့် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေး၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်သည် မေ ၂၅ နှင့် ၂၆ ရက်များတွင် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် လာရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
၎င်းသည် ခရီးစဉ်အတွင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး သွားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံ ကဏ္ဍတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏
လက်ပံတောင်းဒေသမှာ လယ်ယာမြေလျော်ကြေးမယူပဲ လယ်ပြန်ထွန်ပြီး လယ်စောင့်တဲ ဆောက်လုပ်နေတဲ့ လယ်သမားတွေ နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ တွေ့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ပီး လယ်သမားတဦး သေနတ် ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်ခင်မင်းဇော် သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ ရိုက်ကူး မတင်မာဆွေ
ရှမ်းမြောက်ပိုင်း အစိုးရတပ်နှင့် TNLA တအာင်းတပ် တိုက်ပွဲ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေ
ဧပြီလ ၂၅ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း တအာင်း (ပလောင်)ဒေသအတွင်း အစိုးရ စစ်ကြောင်းများ အင်အားဖြည့်တင်းနေ၍ လက်ရှိ အင်အား ၃,၀၀၀ ကျော်ရှိလာပြီး တိုက်ပွဲများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်ဟု တအာင်းပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (PSLF) အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးမိုင်ဘုန်းကျော် က ပြောသည...်။
နမ်ခမ်း၊ ကွတ်ခိုင်၊ မန်တုံ၊ နမ်ဆန်၊ မိုင်းလုံ၊ မိုးမိတ် စသည့် မြို့နယ်များတွင်း အစိုးရ စစ်အင်အား တိုးမြှင့်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မိုင်ဘုန်းကျော် က ပြောသည်။
“(ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး) မင်းအောင်လှိုင်က လေးလပတ် အစည်းအဝေးမှာ ကျနော်တို့ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေကို ရှမ်း၊ ကချင်၊ အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့ ပလောင်ပေါ့။ အကုန်လုံးကို ချေမှုန်းရေး ညွန်ကြားချက်တွေ ထုတ်တယ်။ အဲဒီအတိုင်း၊ သူတို့ စီမံချက်အတိုင်း အကောင်အထည် ဖော်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲက
သူအသက် ၃ဝမှာ တတ်ထားတဲ့ ပညာလေးနဲ့ ဆွံအ နားမကြားကျောင်းမှာ ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် မသန်မစွမ်း ကလေးတွေအတွက် ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ထပ် မသန်မစွမ်းသူတွေ
ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာ ပြိုကျခဲ့တဲ့ အထပ် ၈ ထပ် အဆောက်အဦးပုံ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဒက္ကာမြို့စွန်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှိရာ အထပ် ၈ ထပ်ရှိတဲ့ အဆောက်အဦးတခု ပြိုကျမှုမှာ လူ ၇၀ ထက်မနည်း သေဆုံးပြီး၊ ရာဂဏန်းချီ ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ကြောင်း အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး ၀န်ထမ်းတွေက ပြောပါတယ်။
Savar အရပ်မှာရှိတဲ့ Rana Plaza ကုန်တိုက်ရဲ့ အပြိုအပျက်တွေကြားမှာ ပိတ်မိနေသူတွေကို ကယ်ဆယ်နိုင်ဖို့လည်း အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတွေ ဆက်လက် တူးဖော်ရှာဖွေ နေကြတာပါ။
ပြိုကျသွားတဲ့ ကုန်တိုက်မှာတော့ ဘဏ်တခု၊ အထည်ချုပ် စက်ရုံနဲ့ တခြားဈေးဆိုင် အတော်များများ ရှိပါတယ်။ ဒက္ကာမြို့တော်နဲ့ အနီးအနားမှာ ရှိကြတဲ့ အဆောက်အဦးတွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအတိုင်း မလိုက်နာဘဲ တည်ဆောက်ထားလေ့ ရှိတတ်
HRW အစီရင်ခံစာကြောင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ လူနည်းစု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အကြား စိုးရိမ်မူတိုးပွား
Human Rights Watch ( HRW) မှ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် အဆိုပါ အစီရင်ခံစာပါ အချက်အလက်များကို အခြေခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော သတင်းများကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ ရုပ်သံလိုင်းများမှ ထုတ်လွှင့် ပြသနေသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူနည်းစုများ အကြား စိုးရိမ်မူများ တိုးပွားနေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
“ ကျွန်မက မနေ့ကရော၊ ဒီနေ့မနက်ကရော ဒီနိုင်ငံက ရုပ်သံလိုင်းလိုလိုမှာ မြန်မာ သတင်းကို ထုတ်လွှင့်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပြောတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေကို ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တွေက လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ် နေတယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုပါတယ်။ ပြီးရင် ဒီသတင်းတွေနဲ့ အတူ ဗလီတွေ၊ လူတွေ သတ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့ ပုံတွေကို ထုတ်လွှင်ပြနေတဲ့ အတွက် ဒီမှာလည်း ပြဿနာတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ ထင်မိတဲ့ အတွက် စိုးရိမ်မိတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒက္ကားမြို့က ရခိုင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ဆိုသည်။
၎င်းပြင် ယနေ့ထုတ် သတင်းစာများတွင်လည်း HRW အစီရင်ခံစာကို ကိုးကားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မူများ ပေါ်ပေါက်နေပါသည် ဆိုသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့်
၂၃.၄.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ည ၈း၃၀ ခန့်အချိန်၌ ပြည်မြို့ န၀ဒေးတံတားအောက်ရှိ ရှုခင်းသာတွင် စုံတွဲတစ်တွဲကို စစ်သားသုံးယောက်မှ လုယက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ကောင်လေးကတော့ လည်ပင်းကို လိမ်ချိုးခံထားရပြီး ရေထဲသို့ ပြုတ်ကျနေပါတယ်။ ကောင်မလေးသည် ကြောက်လန့်အော်ဟစ်သဖြင့် အနီးအနားရှိ ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သားများက ရောက်ရှိလာသဖြင့် စစ်သားသုံးယောက် ထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။
ရဲစခန်းသို့အကူအညီတောင်းရာ အမှတ်(၂) စခန်းမှ တာဝန်ကျ ဒုရဲအုပ် ဆန်းဦးနှင့် ရဲများရောက်ရှိလာပြီး တရားခံကို လိုက်လံရှာဖွေကြပါတယ်။ ရပ်ကွက်ထဲမှ လူများနှင့် ရဲများ၏ ရှာဖွေမှုကြောင့် ထွက်ပြေးသွားသော စစ်သားသုံးယောက်ထဲမှ နှစ်ယောက်ကို ဖမ်းမိပါတယ်။
တရားခံများသည် လက်နက်များလည်း ကိုင်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ ထိုအချိန် စစ်ဗိုလ်တစ်ဦးရောက်ရှိလာပြီး တပ်ပြေးများ လိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာ ယခု တော့ မိပြီဆိုပြီး အဖမ်းခံထားရသော စစ်သားနှစ်ယောက်ကို ရဲလက်ထဲမှ တောင်းရမ်းပါတယ်။ ဒါ ရဲမှုခင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပေမယ့် စစ်တပ်နဲ့သာဆိုင်တယ်ဆိုသဖြင့် တရားခံနှစ်ဦးလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။
ကောင်လေးအလောင်းကို ရေထဲတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး လည်ပင်းလိမ်ချိုးထားသော ဒဏ်ရာကြောင့် သေဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြို့သူမြို့သားများသည် တပ်မတော်သားများ မြို့လယ်ခေါင်တွင် လက်နက်ဖြင့် အနုကြမ်းစီး ဓါးပြတိုက် လူသတ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်အတွက် မကျေနပ်နိုင်ကြပဲ ညတွင်း ချင်းပင် အမှတ်(၂) ရဲစခန်းတွင် စုရုံးကြကာ တရားခံများအား ဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကတော့ မည်သူပင်ဖြစ်စေ ပြစ်မှုကျူးလွန်သဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
Copy from - Pon Nya(FB) အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိ ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် တပ်မဟာ ၄ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း များနှင့်လည်း အစိုးရတပ်နှင့် နေ့စဉ်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု ကွတ်ခိုင်ဒေသခံ ဇော်အောင်
အင်းလေးကန်သည်-ယ္ခင် က 60 km အရှည်နှင့် 13km အကျယ် ရှိခဲ့ သော်လည်း ယခုအခါတွင် 18km အရှည်နှင့် 6km အကျယ်သာကျန်ရှိတော့သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်၂၀ ကျော်အချိန်ခန့် ကတည်းကပင် ဘူမိဗေဒ ပညာရှင်များသည်၊ အင်းလေးကန်အား မထိန်းသိမ်းပါက နှစ်(၅၀) အတွင်း တိမ်ကော သွားနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ထို့သို့ တိမ်ကော သွားပါက ကန်အတွင်းရှိ ရေခြံနှင့်၊ ကျွန်းမျော စိုက်ခင်းများ ဆုံးရှုံးသွားပြီး ဒေသခံများ၏ ဘဝ ရပ်တည်မှုနှင့် ဂေဟ စံနစ်များပါ ပျက်စီး သွားနိုင်မည်ဟု ပညာရှင်များက ပြောသည်။
လက်ရှိ အချိန်တွင် တဖြေးဖြေး တိမ်ကောခမ်းခြောက်စ ပြုနေသော အင်းလေးကန် ထိန်းသိမ်းရန် ၊ဒေသခံများ အသိပညာ လူမှုဘဝနှင့် စီးပွားရေးပိုမို တိုးတက်လာစေရန်နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်း စိုပြေရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး၊ ၈၈မျိုးဆက်(ရှမ်းပြည်) ပွင့်လင်း လူအဖွဲ့စည်းဝင်များသည် အင်းလေး ဒေသထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အမိန့်နဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ အကျဉ်းထောင် အသီးသီးမှာရှိတဲ့ အကျဉ်းသား ၉၀ ဝန်းကျင် လောက်ကို ဒီကနေ့ ပြန်လွှတ်ပေး လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်းစိန်ထောင် ကနေ အကျဉ်းသား ၁၀ ဦး ပြန်လွတ် လာပြီး၊ အဲဒီ အထဲမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၈ ဦး ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘီဘီစီက စုံစမ်း သိရှိ ရတဲ့ အင်းစိန်ထောင်က ပြန်လွတ် လာတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ထဲမှာ ကိုရဲထက်စိုး၊ ကိုဇော်မိုး၊ ကိုနေမျိုးသူရ နဲ့ ကိုစိုင်းအောင်ကျော် တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
သာယာဝတီ ထောင်က နေ အကျဉ်းသား ၃၀ လောက် ပြန်လွတ် လာရာမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂ ယောက်ပါဝင် ပါတယ်။ သူတို့ ကတော့ ကိုအောင်သူ နဲ့ ကိုအေးမင်းစိုးတို့ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။ အစိုးရ အပါ အဝင် အကျဉ်းသား စိစစ်ရေး အဖွဲ့ လေးဖွဲ့ရဲ့ စာရင်း အရ လက်ကျန် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား
၃၀ဝ လောက်ရှိ တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်လည် လက်ခံရေးအတွက် ကရင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာ ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်မှုတွေ စတင်နေပြီလို့ ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်လည်လက်ခံဖို့ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်တလျောက် မြို့နယ်ခွဲ(၉)ခု ကို သတ်မှတ်ထားပြီး၊ အဲဒီမြို့နယ်ခွဲတွေကတော့ ဘောဂလိ၊ လိပ်သို၊ ပိုင်ကျုံ၊ ရှမ်းရွာသစ်၊ ကမမောင်း၊ ကျိုက်ဒုံ၊ ဘုရားသုံးဆူ၊ ဝေါလေမြိုင် နဲ့ ဆုခလိ တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
ပြန်လာသူတွေအတွက် ထောက်ပံ့ကူညီရေးဆိုင်ရာ စီမံချက်တွေရေးဆွဲထားတယ်လို့ ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရ နယ်စပ်ရေးရာနဲ့ လုံခြုံရေး ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်လွင် က ပြောပါတယ်။-
ဒါ့အပြင် ဒုက္ခသည်တွေအတွက် နိုင်ငံတကာ ကူညီရေးအဖွဲ့တွေလည်း လာရောက်ျနကြောင်း၊ လတ်တလော အနေနဲ့ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာကတဆင့် ရောက်ရှိလာတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ နီပွန်ဖေါင်ဒေးရှင်း၊ဂျိုက်ကာနဲ့ဂျပန်ပလက်ဖောင်းအဖွဲ့တွေက စီမံကိန်းတွေ ချမှတ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး
မြန်မာမှာ ကျင်းပမယ့် Davis Cup တင်းနစ်ပွဲ ရွေ့ဆိုင်းရ
Copy from - thithtoolwin7.com
Mai Kyaw Oo,aMyanmar soldier who fled to Japan in 1999 smiles in Tokyo on Tuesday.
For many Myanmar nationals in Japan, their homeland is still beyond their reach.
Myanmar is now drawing public attention in Japan, triggered by the ongoing visit by the nation's pro-democracy leader Aung San Suu Kyi. Myanmar is now thought to be on track for democratization after its transition to civilian rule in 2011. The nation is attracting both the world's attention and financial investments.
But Myanmar nationals who fled the military junta's suppression and have been living in Japan since said their county does not seem to have changed in nature.
Suu Kyi, 67, who is on her first visit to Japan in 27 years, met about 2,000 Myanmar residents Saturday in Tokyo and told them they need to hang on to continue moving toward democracy.
Mai Kyaw Oo, 46, who was at the gathering, said Myanmar people finally became able to takeastep forward, and the real fight starts from now.
Mai Kyaw Oo, from Shan State in eastern Myanmar, wasasoldier of Palaung tribe, an ethnic minority group suppressed by the military junta. He fled to Japan in 1999, fearing for
အခုလို လုပ်ဆောင်တာဟာ မြန်မာ နိုင်ငံက ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြု တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ်လက်နက် ရောင်းချခွင့် ပိတ်ပင်ထားတာ ကိုတော့ ဆက်ထားဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တုန်းကတော့ ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ယာယီ ရုပ်သိမ်း ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး၊ အခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံက ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အစီအစဉ်တွေဟာ အပြီးတိုင် ရုပ်သိမ်းသင့်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးကလည်း ပြောပါတယ်။
Copy from - zayyar
Posted by PNSjapan at 8:45 AM0comments
22 April 2013 by KNG news
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) တပ်ရင်း ၁၇ နယ်မြေတွင် အစိုးရနှင့် KIA တပ်ဖွဲ့ကြား စနေနေ့ တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တိုက်ပွဲသည် ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့ တပ်ရင်း ၁၇ နယ်မြေမနောင်ဘွမ် (Manau Bum) တွင် အစိုးရစစ်တပ် ခလရ ၁၂၉ တပ်ဖွဲ့နှင့် အခြားအမည်မသိရသော တပ်ဖွဲ့များလည်းပါဝင်ပြီး KIA တပ်ဖွဲ့များရှိသည့် နေရာသို့ ထိုးစစ်ဆင်လာချိန် KIA တပ်ဖွဲ့များပစ်ခတ်လိုက်ရာမှ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ထိုပစ်ခတ်မှုသည် မနက် ၅ နာရီခွဲမှ ၈ နာရီဝန်းကျင်တွင်တစ်ကြိမ်နှင့် ၁၁ နာရီမှ ညနေပိုင်း ၃ နာရီခန့်တွင် တစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း တပ်မဟာ ၄ KIA အရာရှိတစ်ဦးကပြောသည်။
“သူတို့ကနောက်ဆုတ်သွားလိုက်ပြန်ပစ်လိုက်နဲ့ အဲဒီလိုပစ်လိုက်ရပ်လိုက်နဲ့ပစ်ခတ်ကြတာ။ နောက်တော့ နောက်ဆုတ် သွားတယ်။ ဘယ်လောက်သေတယ် ဒဏ်ရာရတယ်တော့မသိဘူး။ ကျနော်တို့
မြန်မာနှစ်သစ်ကူး စာပေ ဟောပြောပွဲ
အလင်းအိမ် မိသားစုမှ ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ မြန်မာနှစ်သစ်ကူး စာပေ ဟောပြောပွဲ ဆရာမဂျူးမှ စာပေ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ဆရာအော်ပီကျယ်မှ ဤခရီးနီးသလား ခေါင်းစဉ်များဖြင့် ဟောပြောသွားခဲ့သည်။
Posted by PNSjapan at 12:52 PM0comments
ဘော့စတွန် မာရသွန် ဗုံးခွဲ တရားခံတွေလို့ သံသယဖြစ်ခံရတဲ့ ညီအကို ၂ ဦးကို တဦးသေ၊ တဦး ရှင် အဖြစ် ဖမ်းဆီး ရမိပြီးနောက်မှာတော့ ဘော့စတွန်အရေး ပြီးဆုံးပြီလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေက သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ပြီး အသိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။
Water town မြို့ဆင်ခြေဖုံးတနေရာမှာ လှေတခုအတွင်း ပုန်းအောင်းနေတဲ့ Dzhokhar Tsarnaev ကို ဖမ်းဆီးရမိလိုက်ပြီးနောက် အခုလို ပြီးဆုံးသွားပြီလို ကြေညာတာပါ။
သူ့ကို လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေက ဖမ်းဆီးတဲ့အခါ တမင် အသက်ရှင်လျှက် ဘယ်လို ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းဓာတ်ပုံကိုလည်း ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အခုတော့ အသက်ရှင်လျှက် ဖမ်းဆီးခံရသူ ချင်ချင် အမေရိကန်သား အသက် ၁၉ နှစ်ရှိ Dzhokhar Tsarnaev ကို တရားဥပဒေအရသာ စုံစမ်း ဖော်ထုတ် အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ တာဝန်ရှိ သူတွေက ပြောပါတယ်။
ဘော့စတွန်နဲ့ ၀ါးတာတောင်း၊ ကင်းဗရစ်ခ်ျ မြို့သူမြို့သားတွေလည်း အခုတော့ အိမ်အပြင်တွေ ကို ထွက်လာကြပြီး အဆိုပါ မြို့ကလေးက ပြန်လည် ထွက်ခွာလာကြတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ ယာဉ်တန်းကြီးကို ကြိုဆို
နှုတ်ဆက် မှုတွေနဲ့ ပြန်လည်စည်ကားလျှက် ရှိပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 12:43 PM0comments
တအာင်း (ပလောင်) ဘုံစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာရေး ညီလာခံ အပါအ၀င် ရွှေဖီလက်ဖက် ရာသီပွဲတော်ကို ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ မန်တုံမြို့နယ်တွင် ကျင်းပ ပြီးစီးခဲ့ကြောင်း ညီလာခံ ဖြစ်မြောက်ရေး ဥက္ကဌ တာဝင်ကျော်က ပြောသည်။
တအာင်းဘုံစာပေနှင့် ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှုများ သတ်မှတ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ...လုံးဆိုင်ရာ (၁၀) ကြိမ်မြောက် တအာင်းစာပေ ယဉ်ကျေးမှု ညီလာခံအား လွန်ခဲ့သည့် မတ်လ (၂၃) ရက်နေ့မှ (၂၆) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့ ရာ လူတစ်သောင်းကျော် တက်ရောက်ကြောင်း တာဝင်ကျော်က ပြောဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ တအာင်း အမျိုးသားတွေ အတွက် တစ်ခုတည်းသော ဘုံ စာပေ၊ ဘာသာ စကား နဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ရှိဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် (၄) နှစ် တစ်ကြိမ် တအာင်း စာပေ ယဉ်ကျေးမှု ညီလာခံကို ပြုလုပ်ပေး လေ့ရှိခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်ဆို (၁၀) ကြိမ်မြောက် ညီလာခံပင် ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း” ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ ညီလာခံအား ၁၉၇၂ ခုနှစ်က တအာင်း မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ် တာပေါ့လ်ဆံမှ ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့ပြီး တအာင်း ဘုံ ဘာသာစကား၊ စာပေ အဖြစ် စန်းလုံ (Samlong) ကို အသုံးပြု သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရွေးချယ် အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။
တအာင်း အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသော စာပေတွင် စန်းလုံ (Samlong) နှင့် ရူးမိုင်း (Rumai) ဟူ၍ နှစ်မျိုး နှစ်စား ရှိပြီး ယင်း စာပေ ၂ မျိုးကို တစ်မျိုးတည်း ဖြစ်ပေါ်လာရန် တအာင်း အမျိုးသားများက ကြိုးပမ်း နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း တာဝင်ကျော်က ဆိုသည်။
“ပလောင် လူမျိုးမှ တအာင်း လူမျိုး အဖြစ်သို့ သုံးစွဲခေါ်ဆိုသွားဖို့ တူညီသော အမြင် တစ်ခုအဖြစ် လက်ခံခဲ့ပြီးဘဲ။ စာပေ ကျတော့ တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ လိုပါတယ်။ အဲတာကြောင့် ဘယ်လို ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် သွားကြမှာလဲ တအာင်း အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်များရဲ့ အမြင်တွေ ဖလှယ်နိုင်ဖို့ ဒီ ညီလာခံကို ကျင်းပလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ယင်းကိစ္စအပေါ် တအာင်းပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး PSLF ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ တာအိုက်ဘုန်းက စန်းလုံ (Samlong) စာပေအား ဘုံစာပေ အဖြစ် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (၄၀) ကျော် ကတည်းက သတ်မှတ်လာခဲ့ သောကြောင့် ဆက်လက် အတည်ပြု သွားကြရန် တိုက်တွန်း ပြောဆိုသည်။
“တအာင်း အမျိုးသား တစ်ရပ်လုံး အတွက် ကြည့်ပြီး တအာင်းစာပေလည်း တစ်ခု ဖြစ်သွား စေချင်တယ်။ ဒါ့အပြင် တအာင်းအမျိုးသားနေ့ သတ်မှတ်သွားနိုင်ဖို့ အရေးကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ကျန်ရှိနေသေးတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ထို့အပြင် တအာင်း လူမျိုးများ၏ နာမည်ရှေ့တွင် အမျိုးသားများ အတွက် “မိုင်”၊ အမျိုးသမီးများ အတွက် “လွေး” တို့ကို အသုံးပြု ခေါ်ဆိုသွားရန်နှင့် တအာင်း စစ်ဖက် အရပ်ဖက် အရာရှိများ အပါအ၀င် အသက် (၇၀) ကျော် တအာင်း အဘိုးအိုများကိုမူ “မိုင်” အစား “တာ” ဟု သုံးစွဲကြရန် ချမှတ်ထားသည်ဟု သိရကြောင်း တာအိုက်ဘုန်း က ပြောဆိုသည်။
Posted by PNSjapan at 12:40 PM0comments
အစိုးရတပ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် တန့်ယန်း၌ အိမ် ၂ လုံးပြာကျ လူ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တန့်ယန်းမြို့နယ် လွယ်စေးအုပ်စု အတွင်းရှိ ကျေးရွာ နှစ်ရွာပေါ်အား မြန်မာစစ် တပ်မှ လက်နက်ကြီး ဖြင့် ပစ်ခတ်သဖြင့် ရွာသား ၂ ဦးဒဏ်ရာရကာ အိမ် ၂ လုံး ပြာကျခဲ့ကြောင်း တန့် ယန်း ဒေသခံများ က ပြော သည်။
“ လွယ်စေး(တရုတ်)ရွာထဲကို လွယ်ဖှာ့ဖာ စခန်းကနေ မြန်မာ့စစ်တပ်က လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်ချတယ်။ လွယ်စေး(တရုတ်)ရွာက ရွာသားတွေက မြို့ဘက် သိပ်မပြောင်းကြဘူး။ ဆိုတော့ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် ကောင်လေး တယောက်နဲ့ အသက် ၁ နှစ်အရွယ် ကလေးလေး တယောက် ကျည်စ ထိ ဒဏ်ရာရတယ်။ အခု ၂ ယောက်စလုံး တန့်ယန်းဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူ နေ တယ်” တန့်ယန်းမြို့နေ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် များအား ကူညီမှုပေးနေသော စိုင်းနောင့်က ပြောသည်။
ဧပြီလ ၁၅ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲက ရွာအနီးတောင်ကုန်း(လွယ်ဖှာ့ဖာတပ်စခန်း) ပေါ်ရှိအစိုးရတပ်စခန်းမှ လွယ်စေးရွာထဲသို့ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အားလူ (အသက် ၁၇ နှစ်) နှင့် အားဝေချင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန်လေဆိပ်ကုို ရောက်ရှိလာပုံ မြင်ကွင်း
တပတ်ကြာ ဂျပန်ခရီးစဉ်ကနေ ပြန်လာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကုို ကြိုဆုိုနေပုံနဲ့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကုို စုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။ ရုိုက်ကူး - အောင်ကြီး
မနေ့ည ၁၁ နာရီကျော်လောက်မှာ ရဲတွေနဲ့ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားပြီး မသင်္ကာသူ ၂ ဦးထဲက တဦးဟာ သေနတ်ဒဏ်ရာတွေ နဲ့ ဆေးရုံမှာ သေဆုံး သွားတာပါ။ Watertown မြို့မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ရောက်ရှိနေပြီး FBI ပြည်ထောင်စု ထောက်လှမ်းရေးဗျူရို၊ ဗုံးနဲ့ ဖောက်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေလည်း ရောက်ရှိနေတယ်လို့ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာ အနီးမှာ ရောက်နေတဲ့ ဗွီအိုအေ
နိုင်ငံတကာ ကမ္ဘာ ကုလသမဂ္ဂမှ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ထိုးစစ်ဆင် ခြေမှုန်းနေမှုအား အဆုံးသတ်ပြီး နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာဖို့ ရာဇသံ ချမှတ်ရန် ဆောင်ရွက်မှုအား တရုတ်ပြည်မှ ဗွီဒိုအာဏာဖြင့်ပယ်ချလိုက်ပြီး ၃ရက်ခန့်ကြာသောအခါ တရုတ်ပြည်မှ (တရုတ်ပြည်မြောက်ဖျား ရေနံရှာဖွေရေးကုမ္မဏီ)မှလည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း အား မြန်မာ့ရေနံ သဘာဝ ဌာနအား ဆုကြေးမစ လဒ်ထိုးသည့်အနေဖြင့် ပေးဆောင်ပြီး လက်ရှိ အေဒီ အမှတ် (၁) အားလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိပြီး ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ နောက်ထပ် ၂ သန်း ထပ်မံပေးဆောင်ပြီ အေဒီ (အမှတ် ၈)
မြန်မာပြည်အတွင်း နိုင်ငံခြားမှ ၀င်လာသောငွေ၏ အကြီးမားဆုံးသည် တန်ဘိုးဂနကြီးသော ကျောက်မျက်၇တနာလုပ်ငန်းနှင့် သဘာဝတွင်းထွက် ဂစ် များအား စုပ်ထုတ်ရောင်းချခြင်းဟု သိရသည်။ ယခင် ဦးသန်းရွှေ စစ်အုပ်စုနှင့် ယခု ဦးသိန်းစိန်တို့၏ အုပ်စုနှစ်ခုလုံးက တိုင်းပြည်၏ ၀င်ငွေပမာနအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွားဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုကြောင်းကို ယခုတိုင်ပင်ရှိနေလေသည်။ တိုင်းပြည်၏ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ၀င်ငွေပမာဏအား ယနေ့ထိ ဘယ်လို ရရှိသည်၊ မည်သို့ စီမံသုံးစွဲသည် ဆိုသော အချင်းရာအား ဖွင့်ထုတ်ဖေါ်ပြခြင်းမရှိသည့်အပြင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှ ပါဝင်ပတ်သက်သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံလုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအား အဆိုပါဝင်များတွင် စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိနေသောကြောင့် မည်သို့မည်ပုံ ရရှိသုံးစွဲနေသည်မှာ ခန့်မှန်းတွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော အနေထားတွင်ရှိနေရခြင်းနှင့် အကျိုးမြတ်ခွဲဝေရယူမှုအနေထား ဖုံးကွယ်ထားခြင်းသည်ကပင် အလွန်ရှည်လျှားသော မြန်မာပြည်၏ သံယံဇာတမှာ ကြောက်မက်ဖွယ်ကြိမ်စာသင့်နေကြောင်း Asia Review စာစောင်က ရေးသား
ပါတီခေါင်းဆောင်ဟာ နိုင်ငံသမ္မတ မဖြစ်ချင်သူရှိပါသလား၊ မဖြစ်ချင်ဘူးဆို သူဟာ ဟန်ဆောင်သူသာ ဖြစ်တယ်
၁၇ ရက်နေ့က ပြုလုပ်တဲ့ ဂျပန်သတင်းထောက်များ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် သမ္မတ ဖြစ်ချင်သော သဘောထားသည် တိုင်းပြည်နှင့် မှုဝါဒတွေ အတွက်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရ လက်ထက် ဖိနိမ့်မှုများ မပြုလုပ်ရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပြီး စစ်တပ်၏ ဆောင်ရွက်မူတွေဟာ လုံးဝမမြင်တွေ့ နိုင်ပါ။မေးခွန်းမေးသူ၏ မျက်လုံးကို သေသေချာချာ ကြည့်ပြီး ဘာမှမှတ်သားခြင်း မပြုဘဲ တချက်ခြင်း တချက်ခြင်း ပြန်လည် ဖြေဆိုခဲ့သည်ကို တွေ့ မြင်ရသည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ စ၍ ၁၄ နှစ်ကျော် ဖမ်းဆီး ခံရခြင်း၊ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချခံရခြင်းများ ရှိခဲ့သောလည်း မိမိအနေဖြင့် အနစ်နာခံ ဆုံးရှုံးခံခဲ့သူအဖြစ် မထင်ခဲ့ပါ မိမိ၏ ဆန္ဒဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု တိုကျိုတက္ကသိုလ် ဟောပြောပွဲတွင် ပြုံး၍ ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ၃ လပိုင်းတွင် စစ်အစိုးရမှ ပြည်သူ့ အစိုးရအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ကာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၁ လ ပိုင်းတွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၄ လပိုင်းတွင် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င် ရောက်ခဲ့ကာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး မြန်မာပြည်တွင် အကြီးဆုံးသော
မှန်းချက်နှင့် နှမ်းထွက် မကိုက်သော KNPP နှင့် အစိုးရ ဆွေးနွေးပွဲ
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီ (KNPP) ဆက်ဆံ ရေးရုံး ကိုယ်စားလှယ်အား အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ် များမှ အလွတ် သဘော တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့မှုသည် KNPP တောင်းဆို နေသော ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ မဟုတ်ကြောင်း KNPP အရာရှိ တဦးက ဆိုပါသည်။
““သူတို့ ဘက်က ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီဝင် အဖွဲ့ တွေလို့ ပြောတယ်။ သူတို့က ကယားပြည်နယ် ကို လာလည် ရင်းနဲ့ ကျနော်တို့နဲ့ တွေ့ချင်တယ် ဆိုပြီး ဖိတ်ခေါ် လာတယ်။ အဲဒီ လွိုင်ကော် မှာ ရှိတဲ့ ကျနော်တို့ ဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံ တွေနဲ့ သွားတွေ့ လိုက်တယ်” ဟု ဆိုပါသည်။
ယင်း အလွတ်သဘော ဆွေးနွေး ပွဲကို အစိုးရ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကော်မီတီဝင် ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေး၊ ဦးခင် မောင် စိုး နှင့် ဦးဝင်းမြင့် ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီ (၁၂) ရက်နေ့ တွင် ကယားပြည်နယ် အစိုးရရုံး အစည်း အဝေးခန်းမ၌ ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီ လွိုင်ကော် ဆက်ဆံရေးရုံး တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှုးကြီ ထွန်းနိုင် ဦးဆောင် သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ် များနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့သည်ဟု ဧပြီလ (၁၆) ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်း
ဂျပန်နိုင်ငံကို အလည်အပတ်ရောက်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့နေ့ခင်းက ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေး (Shinzo Abe)နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ဂျပန်မြန်မာနစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့မနက်ကလည်း ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးမျှော်စင်မှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Tokyo Skytree မျှော်စင်ကို တက်ရောက်လေ့လာခဲ့သလို နာမည်ကြီး ဂျပန် အီလက်ထရောနစ် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Panasonic Center ကိုလည်း သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မနေ့ကလည်း ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့သလို တိုကျိုတက္ကသိုလ်မှာ မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ခရီးစဉ်အတွင်း ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဂျပန်အိမ်ရှေ့မင်းသား Naruhito နာရူဟီတိုနဲ့ တိုကျိုမြို့တော်က တိုဂူးနန်းတော်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့သလို ဂျပန်အောက်လွှတ်တော်ကိုလည်း သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည်ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ မနက် ၇နာရီခွဲက ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံး မျှော်စင်များတွင် တခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး 634.0 metres (2,080 ft) ရှိတဲ့Tokyo Sky Tree မျှော်စင်သို့ မြန်မာ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နာရီဝက်ကျော် သွားရောက် ကြည့်ရှု လေ့လာခဲ့သည်..။
ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၁၂ မေလက ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ အဆိုပါမျှော်စင်ဟာ ကြည့်ရှုသူများ အလွန်များပြီး ယနေ့အထိ ကြိုတင် Booking လက်မှတ်များဖြစ်သာ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုခွင့် ရတဲ့ မျှော်စင်ဖြစ်ပါတယ်..။
သာမာန်ပြည်သူများအတွက် မနက်(၈)နာရီမှာသာ စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့ အဆိုပါမျှော်စင်အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် အထူးသီးသန့် ဧည့်သည်တော် အနေဖြင့် မနက်၇နာရီခွဲမှာ တက်ရောက်ကြည့်ရှု စေချင်းဖြင့် ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါသည်။
Boston ဗုံးဖေါက်ခွဲမှု့အတွက် သံသာယ ရှိသူတွေကို အသေးစိတ်ရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေပါ။
Boston ဗုံးဖေါက်ခွဲမှု့အတွက် သံသာယ ရှိသူတွေကို Boston ဗုံးဖေါက်ခွဲမှု့အတွက် သံသာယ ရှိသူတွေကို အသေးစိတ်ရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေပါ။ အကြမ်းဖက်မှု့အတွက် စနစ်တကျကို ချိန်းချက်လှုပ်ရှားပုံတွေကိုမြင်ရပီ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက် များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
အသေးစိတ်ရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကြည့်လိုပါက အောက်ပါလင့်သို့ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။